(၂၁)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့မင်္ဂလာနှင့် လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်း (၁)နှစ်ပြည့် မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည် .. နေ့ဆွမ်းကပ်လှူခြင်း | ကျွန်မ၏ခံစားမှုများ သီကုံးရာ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ
December 16, 2009, 10:15 am
၂၀၀၉ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၁၃)ရက်နေ့မှာ ကျွန်မရဲ့ (၂၁)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့နှင့်အတူ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်း မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည် (၁)နှစ် ပြည့်သွားခဲ့ပါပြီ .. ။ နောက်တပတ်ထဲမှာ စာမေးပွဲနှင့် နောက်ငါးလလောက်ဆိုရင် ပြီးဆုံးတော့မည့် ပညာရေးတစ်ခုအတွက် အားသွန်ခွန်စိုက် လုပ်နေခဲ့ရင်း ဒီနှစ် မွေးနေ့မင်္ဂလာအတွက် စင်္ကာပူနိုင်ငံ ဓမ္မဥယျာဉ်ကျောင်းမှာ ရင်းနှီးသော မိတ်ဆွေအနည်းငယ်နှင့်အတူ ကျွန်မတို့ ဇနီးမောင်နှံ နေ့ဆွမ်းကပ်လှူခဲ့ပါတယ် .. ။ နောင်ဘ၀များစွာတိုင် .. သံသရာတစ်လျှောက်လုံး ချစ်ခင်စွာ ပြန်လည်ဆုံဆည်းချင်သည့် ဆန္ဒများဖြင့် … ကျွန်မတို့ဇနီးမောင်နှံ ဆရာတော်ထံ ၀တ္ထုကပ်လှူဒါန်း အမျှပေးဝေ ရေစက်အတူချခဲ့ပါတယ်။ မအားလပ်တာကြောင့် အချိန်မရသော ကျွန်မအတွက် စိတ်ထဲ ဖြစ်ချင်ခဲ့သော .. နေ့ဆွမ်းကပ်လှူရန်အတွက် အစစအရာရာ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သော ချစ်သူခင်ပွန်းကို ချစ်ခင်မြတ်နိုး ကျေးဇူးတင်မိသလို နေ့ဆွမ်းကပ်ချိန် ၀ိုင်းဝန်းပြင်ဆင်ပေးခဲ့ကြသော မိတ်ဆွေရင်းများကိုလည်း ကျေးဇူးတင်မိပါတယ် .. ။
တွဲလက်များ ထာဝရ ခိုင်မြဲပါစေ ညီမရေ့…
Comment by အောင်သာငယ် December 16, 2009 @ 1:29 pm
ညီမတို့ ဇနီးမောင်နှံ နှစ်ဦး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ သော ဘ၀ လေး ကို ကျန်းကျန်းမာမာ နဲ့ ဖြတ်သန်းနိုင် ပါစေ… mie nge
Comment by Anonymous December 16, 2009 @ 2:49 pm
မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်း ရာနှင့်ချီပြီး ချစ်သော မနာကျင်သော ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးဖြင့် လွတ်လပ်စွာ လောကကြီးထဲ ဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေဗျာ…
Comment by နေသစ် December 17, 2009 @ 2:53 am
ညီမလင်းလက်ရေ…Happy belated birthday နဲ့ Happy anniversary ပါဗျာ…။ ချစ်တဲ့သူနဲ့ ရတုနှစ်ပတ်လည် များစွာကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ပါစေ…လို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
Comment by Nyi Linn Thit December 22, 2009 @ 11:35 pm
Comment by Thant December 23, 2009 @ 1:50 pm
well done . well done . well done
Comment by Thant December 23, 2009 @ 1:51 pm
မရှိလိုက်တာ နာတယ်ကွာ။ 😀 နောင် နှစ်တိုင်းနဲ့၊ နှစ်ပေါင်းများစွာ ဒီလိုပွဲမျိုး လုပ်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ် သူငယ်ချင်းရေ။
Comment by Lyn Lyn December 27, 2009 @ 8:58 am